Celebrities Archives - Page 208 of 227 - ShwengweGames
အရငျလိုအပွငျကိုလှတျလှတျလပျလပျပွနျထှကျလို့ရတာနဲ့ တှသေ့မြှလူဖကျနမျးပဈမယျဆိုတဲ့ ကြျောကြျောဗိုလျ
May 31, 2020 by Shwengwe Games
မွနျမာ့ဇာတျသဘငျလောကထဲက ထိပျတနျးသဘငျပညာသညျ မြိုးဆကျတဈဦးဖွဈသလို ရုပျရှငျလောကထဲမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ရပျတညျလာခဲ့တဲ့သူကတော့ သရုပျဆောငျ အကယျဒမီ ကြျောကြျောဗိုလျပါ။
ကြျောကြျောဗိုလျကတော့ သရုပျဆောငျတဈဦးလညျးဖွဈသလို ဒါရိုကျတာမောငျမြိုးမငျးစီစဉျတဲ့ နှငျးဆီအငွိမျ့မှာလညျး လူရှငျတျောတဈဦးအဖွဈနဲ့ ဖြျောဖွနေသေူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
အခုလကျရှိမှာတော့ ကြျောကြျောဗိုလျက stay home ကာလကို အိမျမှာပဲဖွတျသနျးရငျး သီခငျြးတှလေညျးဆိုဖွဈနပေါတယျ။ ဒီအကွောငျးနဲ့ပကျသကျပွီးသူ
” Stay home ကာလမှာ မိုးလငျးတာနဲ့ ဘုရားတရားလုပျဖွဈတယျ။ ရုပျရှငျကွညျ့တယျ၊ စာဖတျတယျ။ သမီးလေးနဲ့မိသားစုအနားမှာ အခြိနျပေးပွီးနဖွေဈတယျ။ social network မှာ ပရိသတျတှကေို စိတျကူးရရငျ ရသလို သီခငျြးလေးတှေ ဆိုပွတာ၊ ဗီဒီယို အတိုလေးတှေ ရိုကျပွတာရှိတယျ။ ကနျြတာ ထှထှေထေူး ထူး လုပျစရာတော့ မရှိပါဘူး။
သီခငျြးဆိုတာက ရုပျရှငျမရိုကျခငျကတညျးက ဝါသနာပါတာ။ ဂီတကို အရငျရူးသှပျခဲ့တာ။ ငယျငယျကအိမျမှာ အမနေဲ့အဒျေါတှကေ ဘောလိဝုဒျကားတှကွေညျ့တာမြားတော့ သူတို့နဲ့လိုကျကွညျ့ရငျး စိတျထဲမှာ သူတို့ရဲ့အနုပညာ အငှအေ့သကျတှကေ ရငျးနှီးပွီးသား ဖွဈနတောနဲ့ နားရညျ ဝပွီး ဆိုဖွဈ၊ ကဖွဈသှားတာပါ။ ” လို့ပွောပွလာပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သူက သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတာနဲ့အညီ အရငျလို ရိုကျကူးရေးတှေ အမွနျဆုံးပွနျလုပျခှငျ့ရဖို့ မြှျောလငျ့နပွေီး ရုပျရှငျရိုကျကှငျးတှနေဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို လှမျးမောနမေိတဲ့အကွောငျးကိုလညျး
” အနုပညာလောကရဲ့လှုပျရှားနရေတဲ့ အနအေထားနဲ့ ဒီရောဂါရဲ့အနအေထားက လုံးဝ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈနတေော့ စိတျမကောငျးဘူး။ လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ အပွငျထှကျလို့ရတဲ့နရေ့ောကျရငျ မကျြစိရှမှေ့ာတှသေ့မြှလူကို ဖကျနမျးမယျ။ တကယျစိတျရငျးနဲ့ပွောတာ။ ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပွလာပါတယျ။
Mg Kaung (Thadinlaynyin)
အရင်လိုအပြင်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်ထွက်လို့ရတာနဲ့ တွေ့သမျှလူဖက်နမ်းပစ်မယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်
မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်လောကထဲက ထိပ်တန်းသဘင်ပညာသည် မျိုးဆက်တစ်ဦးဖြစ်သလို ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့သူကတော့ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ကျော်ကျော်ဗိုလ်ပါ။
ကျော်ကျော်ဗိုလ်ကတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သလို ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းစီစဉ်တဲ့ နှင်းဆီအငြိမ့်မှာလည်း လူရွှင်တော်တစ်ဦးအဖြစ်နဲ့ ဖျော်ဖြေနေသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်က stay home ကာလကို အိမ်မှာပဲဖြတ်သန်းရင်း သီချင်းတွေလည်းဆိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပြီးသူ
” Stay home ကာလမှာ မိုးလင်းတာနဲ့ ဘုရားတရားလုပ်ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်၊ စာဖတ်တယ်။ သမီးလေးနဲ့မိသားစုအနားမှာ အချိန်ပေးပြီးနေဖြစ်တယ်။ social network မှာ ပရိသတ်တွေကို စိတ်ကူးရရင် ရသလို သီချင်းလေးတွေ ဆိုပြတာ၊ ဗီဒီယို အတိုလေးတွေ ရိုက်ပြတာရှိတယ်။ ကျန်တာ ထွေထွေထူး ထူး လုပ်စရာတော့ မရှိပါဘူး။
သီချင်းဆိုတာက ရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်ကတည်းက ဝါသနာပါတာ။ ဂီတကို အရင်ရူးသွပ်ခဲ့တာ။ ငယ်ငယ်ကအိမ်မှာ အမေနဲ့အဒေါ်တွေက ဘောလိဝုဒ်ကားတွေကြည့်တာများတော့ သူတို့နဲ့လိုက်ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့အနုပညာ အငွေ့အသက်တွေက ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်နေတာနဲ့ နားရည် ဝပြီး ဆိုဖြစ်၊ ကဖြစ်သွားတာပါ။ ” လို့ပြောပြလာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ အရင်လို ရိုက်ကူးရေးတွေ အမြန်ဆုံးပြန်လုပ်ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်နေပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို လွမ်းမောနေမိတဲ့အကြောင်းကိုလည်း
” အနုပညာလောကရဲ့လှုပ်ရှားနေရတဲ့ အနေအထားနဲ့ ဒီရောဂါရဲ့အနေအထားက လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အပြင်ထွက်လို့ရတဲ့နေ့ရောက်ရင် မျက်စိရှေ့မှာတွေ့သမျှလူကို ဖက်နမ်းမယ်။ တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ပြောတာ။ ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာပါတယ်။
မင်ျဂလာသကျတမျး ၂ နှဈပွညျ့သှားပွီဖွဈတဲ့ အောငျသူ နဲ့ ပိုးအိအိခနျ့
မွနျမာ့လကျရှေးစငျဘောလုံးအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှုးအောငျသူ နဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ပိုးအိအိခနျ့တို့ကတော့ ဒီနေ့ မလေ ၃၁ ရကျနမှေ့ာတော့ မင်ျဂလာသကျတမျး ၂ နှဈပွညျ့သှားပွီလို့သိရပါတယျ။
အှနျလိုငျးမှာဂိမျးအတူဆော့ရငျးကနေ ဖူးစာစုံခဲ့ကွတယျဆိုတဲ့ အောငျသူ နဲ့ ပိုးအိအိခနျ့တို့ကတော့ လကျရှိမှာ သာယာအေးခမျြးပွီးပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိသား စုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာပါ။
အခုလို မင်ျဂလာသကျတမျး ၂ နှဈပွညျ့သှားတာနဲ့ ပကျသကျပွီး ပိုးအိအိခနျ့က သူမရဲ့ Facebook စာမကျြနှာကနေ
“ဒီနေ့ လို မေ ၃၁ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈမှာ ၂ ယောကျလုံး ဘဝခရီးလမျးကို အတူတူလြှောကျဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခိုငျခိုငျမာမာခပြွီး တရားရုံးရှမှေ့ောကျ လကျထပျစာခြုပျပျေါ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့တာ အခုဆို သားလေးတဈယောကျတောငျရပွီပေါ့လား။
Happy2Years Anniversary ️ပါနျောယောကျြား။အခုထကျပိုပွီး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ဘဝကို နှဈယောကျအတူ ဖနျတီးပွီး လြှောကျလှမျးနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပါတယျ ယောကျြားရေ။အမွဲတမျး မိနျးမစကားကို အလေး ထားပွီးတနျဖိုးထားပေးတဲ့အတှကျလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျရှငျ။ဟိုတုနျး ကထကျပိုခဈြတယျနျော ကလေးအဖေ။ ” ဆိုပွီး ခငျပှနျးဖွဈသူအတှကျ မင်ျဂလာဆုတောငျးစကားလေးရေးသားဖျောပွထားပါသေးတယျ။
အောငျသူ နဲ့ ပိုးအိအိခနျ့ တို့ရဲ့ ၂ နှဈပွညျ့ မင်ျဂလာသကျတမျးအတှကျ ပရိတျသတျတှအေပွငျ လုပျဖျောကိုငျဖကျ အနုပညာတှမေောငျနှမတှနေဲ့ အားကစားသမားအခြို့ကလညျး ဆုမှနျကောငျးစကားတှေ ဝိုငျးဝနျးရေးသားဖျောပွပေးခဲ့ကွပါသေးတယျ။
Mg Kaung (Thadin Laynyin)
မင်္ဂလာသက်တမ်း ၂ နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အောင်သူ နဲ့ ပိုးအိအိခန့်
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုးအောင်သူ နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ပိုးအိအိခန့်တို့ကတော့ ဒီနေ့ မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာတော့ မင်္ဂလာသက်တမ်း ၂ နှစ်ပြည့်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာဂိမ်းအတူဆော့ရင်းကနေ ဖူးစာစုံခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ အောင်သူ နဲ့ ပိုးအိအိခန့်တို့ကတော့ လက်ရှိမှာ သာယာအေးချမ်းပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသား စုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။
အခုလို မင်္ဂလာသက်တမ်း ၂ နှစ်ပြည့်သွားတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပိုးအိအိခန့်က သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေ
“ဒီနေ့ လို မေ ၃၁ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်မှာ ၂ ယောက်လုံး ဘဝခရီးလမ်းကို အတူတူလျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာချပြီး တရားရုံးရှေ့မှောက် လက်ထပ်စာချုပ်ပေါ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာ အခုဆို သားလေးတစ်ယောက်တောင်ရပြီပေါ့လား။
Happy2Years Anniversary ️ပါနော်ယောကျာ်း။အခုထက်ပိုပြီး ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ဘဝကို နှစ်ယောက်အတူ ဖန်တီးပြီး လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ် ယောကျာ်းရေ။အမြဲတမ်း မိန်းမစကားကို အလေး ထားပြီးတန်ဖိုးထားပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟိုတုန်း ကထက်ပိုချစ်တယ်နော် ကလေးအဖေ။ ” ဆိုပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက် မင်္ဂလာဆုတောင်းစကားလေးရေးသားဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
အောင်သူ နဲ့ ပိုးအိအိခန့် တို့ရဲ့ ၂ နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာသက်တမ်းအတွက် ပရိတ်သတ်တွေအပြင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အနုပညာတွေမောင်နှမတွေနဲ့ အားကစားသမားအချို့ကလည်း ဆုမွန်ကောင်းစကားတွေ ဝိုင်းဝန်းရေးသားဖော်ပြပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ကိုဗဈကာလမှာ အနုပညာသမားတှေ အထိနာကွတယျဆိုတဲ့ကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလိုကျတဲ့ ဇာဂနာ
တဈခတျေတဈခါက နိုငျငံရေးလောကကို ထိမိတဲ့ ပွကျလုံးတှနေဲ့ သရျောပွီး အပွုသဘောငျဆောငျထောကျပွခဲ့လို့ ပရိတျသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကိုရခဲ့သူက ဟာသ သရုပျဆောငျဇာဂနာပါ။
ဇာဂနာရဲ့ ပွကျလုံးတှကေတော့ ပရိတျသတျတှကွေားမှာရပေနျးစားကြျောကွား ခဲ့ရုံသာမကဘဲ နိုငျငံရေးပုဒျမနဲ့ထောငျ ကသြညျအထိအောငျမွငျခဲ့တာတော့ ပရိတျသတျတှသေိပွီးသားဖွဈမှာပါ။
အခုလကျရှိမှာတော့ ဟာသရုပျဆောငျဇာဂနာဟာ ဒါရိုကျတာ ဇာတျညှနျးရေးဆာတဈယောကျအဖွဈပါ ပူးတှဲလုပျကိုငျနသေလို မွနျမာ့ရုပျရှငျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျလညျး တဈဖကျတဈလမျးက ပါဝငျဆောငျရှကျနသေူဖွဈပါတယျ။
လတျတလော ကိုဗဈကာလမှာ အနုပညာသမားတှေ အထိနာကွတယျ ဆိုတဲ့ ကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီးသရုပျဆောငျ ဇာဂနာ က အခုလိုပွောပွလာပါတယျ။
” အထိနာတာကတော့ တဈကမ်ဘာလုံးပါပဲ။ အနုပညာသမားမှ မဟုတျပါဘူး။ လူတိုငျးအထိနာကွတာ။အဲ့ဒါကိုမှ အနု ပညာသမားတှပေဲ ပိုပွီး အထိနာတယျလို့ ပွောရငျ ဘယျတရားမလဲ။ ဒါကတော့ ဘယျတတျနိုငျမလဲ။ စားတုနျးကလညျးစားခဲ့ပွီးပွီ။ ဒီလောကျကတော့ ခံပေါ့။ အဲ့ဒါကိုမှ မခံနိုငျဘူးဖွဈနရေငျလညျး ဆကျမလုပျကွနဲ့ပေါ့။ ဒါပဲရှိတယျ။ ”
အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ ယာယီရပျဆိုငျးထားရတဲ့ ကိုဗဈကာလမှာ အနုပညာရှငျတှဟောသူ့ထကျငါအပွိုငျအဆိုငျ ဈေး ရောငျးနကွေတဲ့ ကိစ်စတှကေလညျး တခြို့သော ပရိတျသတျတှကွေားမှာတော့ ဝဖေနျမှုတှရှေိနသေလို ၊ အခွခေံလူတနျးစား ဈေးသညျစဈစဈတှဆေီက စားခှကျလုတယျ ဆိုပွီးတော့လညျး ပွဈတငျပွောဆိုမှုတှရှေိနတောဖွဈပါတယျ။ ဒီကိစ်စတှနေဲ့ပကျသကျပွီးတော့လညျး သရုပျဆောငျ ဇာဂနာက
” ဈေးရောငျးတာတော့ ရောငျးကွပါစေ။ ဒါမကောငျးတာလုပျစားတာမှမဟုတျတာ။ သူမြားပစ်စညျးခိုးတာလညျး မဟုတျဘူး။ သူမြား နှမ တကျလုနတောလညျး မဟုတျဘူး။ ရောငျးတာတော့ ရောငျးကွပါစေ။ သူတို့လညျး ဘယျလောကျရောငျးနိုငျမှာလဲ။ အလှနျဆုံး ၃ လပေါ့။ ရောငျးသူဝယျသူ အသံတူဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ဝယျစားတဲ့သူတှရှေိနလေို့လညျး သူတို့လညျးရောငျးနရေတာပေါ့။ နောကျပိုငျး ဝယျစားတဲ့သူမရှိတော့ရငျ သူတို့လညျးရပျသှားပါလိမျ့မယျ ” ဆိုပွီး ပွောပွလာပါတယျ။
သရုပျဆောငျ ဇာဂနာကတော့ အခုလကျရှိမှာ stay home ကာလကို အိမျမှာပဲ ဖွတျသနျးနပွေီး ရုပျရှငျ နဲ့ သဘငျလောက က အခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ ဟာသသရုပျဆောငျတှနေဲ့ လူရှငျတျောတှကေို အလှူအတနျးပွုနိုငျဖို့ ရငျးနှီးသူ မိတျဆှတှေထေံမှ အလှူလိုကျခံနတေယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ အနုပညာသမားတွေ အထိနာကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့ ဇာဂနာ
တစ်ခေတ်တစ်ခါက နိုင်ငံရေးလောကကို ထိမိတဲ့ ပြက်လုံးတွေနဲ့ သရော်ပြီး အပြုသဘောင်ဆောင်ထောက်ပြခဲ့လို့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရခဲ့သူက ဟာသ သရုပ်ဆောင်ဇာဂနာပါ။
ဇာဂနာရဲ့ ပြက်လုံးတွေကတော့ ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားကျော်ကြား ခဲ့ရုံသာမကဘဲ နိုင်ငံရေးပုဒ်မနဲ့ထောင် ကျသည်အထိအောင်မြင်ခဲ့တာတော့ ပရိတ်သတ်တွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
အခုလက်ရှိမှာတော့ ဟာသရုပ်ဆောင်ဇာဂနာဟာ ဒါရိုက်တာ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆာတစ်ယောက်အဖြစ်ပါ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသလို မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ကိုဗစ်ကာလမှာ အနုပညာသမားတွေ အထိနာကြတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးသရုပ်ဆောင် ဇာဂနာ က အခုလိုပြောပြလာပါတယ်။
” အထိနာတာကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးပါပဲ။ အနုပညာသမားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းအထိနာကြတာ။အဲ့ဒါကိုမှ အနု ပညာသမားတွေပဲ ပိုပြီး အထိနာတယ်လို့ ပြောရင် ဘယ်တရားမလဲ။ ဒါကတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ စားတုန်းကလည်းစားခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီလောက်ကတော့ ခံပေါ့။ အဲ့ဒါကိုမှ မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေရင်လည်း ဆက်မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့။ ဒါပဲရှိတယ်။ ”
အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့ ကိုဗစ်ကာလမှာ အနုပညာရှင်တွေဟာသူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် ဈေး ရောင်းနေကြတဲ့ ကိစ္စတွေကလည်း တချို့သော ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာတော့ ဝေဖန်မှုတွေရှိနေသလို ၊ အခြေခံလူတန်းစား ဈေးသည်စစ်စစ်တွေဆီက စားခွက်လုတယ် ဆိုပြီးတော့လည်း ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း သရုပ်ဆောင် ဇာဂနာက
” ဈေးရောင်းတာတော့ ရောင်းကြပါစေ။ ဒါမကောင်းတာလုပ်စားတာမှမဟုတ်တာ။ သူများပစ္စည်းခိုးတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ သူများ နှမ တက်လုနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရောင်းတာတော့ ရောင်းကြပါစေ။ သူတို့လည်း ဘယ်လောက်ရောင်းနိုင်မှာလဲ။ အလွန်ဆုံး ၃ လပေါ့။ ရောင်းသူဝယ်သူ အသံတူဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဝယ်စားတဲ့သူတွေရှိနေလို့လည်း သူတို့လည်းရောင်းနေရတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း ဝယ်စားတဲ့သူမရှိတော့ရင် သူတို့လည်းရပ်သွားပါလိမ့်မယ် ” ဆိုပြီး ပြောပြလာပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ဇာဂနာကတော့ အခုလက်ရှိမှာ stay home ကာလကို အိမ်မှာပဲ ဖြတ်သန်းနေပြီး ရုပ်ရှင် နဲ့ သဘင်လောက က အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ လူရွှင်တော်တွေကို အလှူအတန်းပြုနိုင်ဖို့ ရင်းနှီးသူ မိတ်ဆွေတွေထံမှ အလှူလိုက်ခံနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ဂီတအကွောငျးဂဃဏန မသိဘဲ ဆရာကွီးလုပျနတေဲ့သူတှကေို အိမျ့ခဈြပွောပွီ
တေးသံရှငျ ခဈြကောငျး ရဲ့ မြိုးဆကျတဈဦးဖွဈသလို ကိုယျတိုငျကလညျး အနုပညာလောကမှာ ပုံစံသဈတဈမြိုးထိုးဖောကျပွီး ဖခငျခွရောနငျးနိုငျခဲ့တဲ့ တေးသံရှငျကတော့ အိမျ့ခဈြပါ။
အိမျ့ခဈြကတော့ သူမရဲ့ အသံပါဝါအားကောငျးကောငျး နဲ့ သီခငျြးသီဆိုနိုငျမှုအပွငျ ဖြျောဖွပှေဲတမှော စငျအောကျကပရိတျသတျနဲ့ တသားတညျးဖွဈအောငျပှဲထိနျးနိုငျမှုကွောငျ့လညျး ပရိတျသတျတှရေဲ့ သဘောကနြှဈသကျခွငျးကိုရရှိထားသူပါ။
သိပျမကွာသေးခငျက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ FG Live Lounge ဖြျောဖွပှေဲမှာလညျး ဖခငျဖွဈသူ ခဈြကောငျး ၊ မောငျလေးဖွဈသူ ဂြူနီယာခဈြကောငျးတို့နဲ့အတူ ပူးတှဲဖြျောဖွမှေုက အတျောလေးအောငျမွငျခဲ့ပါသေးတယျ။
အခုအခါမှာတော့ အိမျ့ခဈြက ဂီတအကွောငျးနဲ့ပကျသကျပွီး ဘာမှလညျးမသိဘဲ သိသလို တတျသလိုနဲ့ ဝဖေနျနတေဲ့သူတှအေကွောငျး သူမရဲ့ အမွငျကို ပွောပွလာပါတယျ။
” Music နဲ့ပတျသကျရငျသိသလိုတတျသလိုနဲ့ဝဖေနျတာဆိုးတယျ။တျောတျောရှငျးပွရခကျတယျလေ။ ကိုယျကရှငျးပွသူကမသိ။ ဒါပမေဲ့ သိခငျြယောငျဆောငျဆရာကွီးလုပျ၊ အဲ့မှာကိုယျကထပျရှငျး။ အဲ့တော့ဘာမှမပွောတာအကောငျးဆုံး ” ဆိုပွီး အိမျ့ခဈြက သူမရဲ့ Facebook က My Day မှာတငျထားခဲ့တာပါ။
အိမျ့ခဈြအနနေဲ့ သူမ ကိုယျတိုငျကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အကွောငျးအရာကို ပွနျလညျဝမြှေထားတာဖွဈတာကွောငျ့ သူမ ကို ဘယျသူကမြား ဂီတအကွောငျး နားမလညျဘဲ သိသလို တတျသလို ဆရာကွီး လာလုပျသှားသလဲဆိုတာတော့စိတျဝငျစားစရာပါပဲနျော။
Source Eint Chit
ဂီတအကြောင်းဂဃဏန မသိဘဲ ဆရာကြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေကို အိမ့်ချစ်ပြောပြီ
တေးသံရှင် ချစ်ကောင်း ရဲ့ မျိုးဆက်တစ်ဦးဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင်ကလည်း အနုပညာလောကမှာ ပုံစံသစ်တစ်မျိုးထိုးဖောက်ပြီး ဖခင်ခြေရာနင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင်ကတော့ အိမ့်ချစ်ပါ။
အိမ့်ချစ်ကတော့ သူမရဲ့ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်း နဲ့ သီချင်းသီဆိုနိုင်မှုအပြင် ဖျော်ဖြေပွဲတေမှာ စင်အောက်ကပရိတ်သတ်နဲ့ တသားတည်းဖြစ်အောင်ပွဲထိန်းနိုင်မှုကြောင့်လည်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ သဘောကျနှစ်သက်ခြင်းကိုရရှိထားသူပါ။
သိပ်မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ FG Live Lounge ဖျော်ဖြေပွဲမှာလည်း ဖခင်ဖြစ်သူ ချစ်ကောင်း ၊ မောင်လေးဖြစ်သူ ဂျူနီယာချစ်ကောင်းတို့နဲ့အတူ ပူးတွဲဖျော်ဖြေမှုက အတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုအခါမှာတော့ အိမ့်ချစ်က ဂီတအကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘာမှလည်းမသိဘဲ သိသလို တတ်သလိုနဲ့ ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေအကြောင်း သူမရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြလာပါတယ်။
” Music နဲ့ပတ်သက်ရင်သိသလိုတတ်သလိုနဲ့ဝေဖန်တာဆိုးတယ်။တော်တော်ရှင်းပြရခက်တယ်လေ။ ကိုယ်ကရှင်းပြသူကမသိ။ ဒါပေမဲ့ သိချင်ယောင်ဆောင်ဆရာကြီးလုပ်၊ အဲ့မှာကိုယ်ကထပ်ရှင်း။ အဲ့တော့ဘာမှမပြောတာအကောင်းဆုံး ” ဆိုပြီး အိမ့်ချစ်က သူမရဲ့ Facebook က My Day မှာတင်ထားခဲ့တာပါ။
အိမ့်ချစ်အနေနဲ့ သူမ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြန်လည်ဝေမျှထားတာဖြစ်တာကြောင့် သူမ ကို ဘယ်သူကများ ဂီတအကြောင်း နားမလည်ဘဲ သိသလို တတ်သလို ဆရာကြီး လာလုပ်သွားသလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော်။
ဒျေါနယျထရမျ့ကို ပွဈတငျဝဖေနျလိုကျတဲ့ တလောဆှဈဖျ
May 31, 2020 May 31, 2020 by Shwengwe Games
နာမညျကြျော ပေါ့ပျအဆိုတျောမလေး တလောဆှဈဖျကတော့ အမရေိကနျသမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့ရဲ့ Twitter မှာတငျထားတဲ့ အကွောငျးအရာ တဈခုနဲ့ပကျသကျပွီး သမ်မတ ထရမျ့ကို Twitter ကနပေဲ ပွနျလညျ ပွဈတငျဝဖေနျလိုကျပါတယျ
သမ်မတ ထရမျ့ ရဲ့ Twitter မှာတငျထားတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုဟာ မငျနီဆိုးတား ပွညျနယျမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့ အကွမျးဖကျသမားတှကေို ခွိမျးခွောကျထားတဲ့အရေးအသားတှပေါဝငျနတော ဖွဈပါတယျ။တလောဆှဈဖျ ဟာ ထရမျ့ရဲ့ ခွိမျးခွောကျစာကို ယခုလိုပဲ တုံ့ပွနျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
” သငျ့ရဲ့ သမ်မတ သကျတမျးတဈလြှောကျလုံးလူမြိုးရေး ခှဲခွားမှုတှဖွေဈပွီးတဲ့နောကျမှာ သငျ့အနနေဲ့ အကွမျးဖကျမှုတှကေို မခွိမျးခွောကျခငျ စိတျထားကောငျးကောငျးလေး ထားသငျ့တယျ။လုယကျမှုတှေ စတငျတာနဲ့ ပဲ ပဈခတျမှုတှေ ဖွဈဖို့ လိုအပျရဲ့လား ? ကြှနျမတို့ အားလုံး သငျ့ကို သမ်မတရာထူးက ပွုတျအောငျ လာမယျ့နိုဝငျဘာလမှာမဲပေးကွမယျ” ဆိုပွီး ရေးသားခဲ့တာပါ။
သူမ အနနေဲ့ အခုလို လုပျဆောငျလိုကျတာဟာ အမရေိကနျ သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့ အပျေါကို သူမ အနနေဲ့ လုံးဝမထောကျခံကွောငျး ပွသလိုကျတဲ့သဘောလဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ တလောဆှဈဖျဟာ လူမညျးအမြိုးသား ဂြော့ချဖလှိုကျ ရဲ့ လညျပငျးကို ဒူးနဲ့ ထောကျပွီး အကွမျးဖကျခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိအတှကျ ဘယျသူ့မှာ တာဝနျရှိလဲဆိုပွီးတော့လညျး မေးခှနျး ထုတျခဲ့ပါသေးတယျ။
တလောဆှဈဖျအနနေဲ့ သမ်မတ ထရမျ့ရဲ့ twitter အကောငျ့ကို တိုကျရိုကျ mention ပွီး ပွောဆိုခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ သမ်မတ ထရမျ့ဘကျကို ဘာမှတုံ့ပွနျ့ထားခွငျးမရှိသေးပါဘူး။
source – daily mail
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တဲ့ တေလာဆွစ်ဖ်
နာမည်ကျော် ပေါ့ပ်အဆိုတော်မလေး တေလာဆွစ်ဖ်ကတော့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ Twitter မှာတင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုနဲ့ပက်သက်ပြီး သမ္မတ ထရမ့်ကို Twitter ကနေပဲ ပြန်လည် ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်
သမ္မတ ထရမ့် ရဲ့ Twitter မှာတင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာ မင်နီဆိုးတား ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ခြိမ်းခြောက်ထားတဲ့အရေးအသားတွေပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။တေလာဆွစ်ဖ် ဟာ ထရမ့်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်စာကို ယခုလိုပဲ တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
” သင့်ရဲ့ သမ္မတ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးလူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သင့်အနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို မခြိမ်းခြောက်ခင် စိတ်ထားကောင်းကောင်းလေး ထားသင့်တယ်။လုယက်မှုတွေ စတင်တာနဲ့ ပဲ ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ရဲ့လား ? ကျွန်မတို့ အားလုံး သင့်ကို သမ္မတရာထူးက ပြုတ်အောင် လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာမဲပေးကြမယ်” ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တာပါ။
သူမ အနေနဲ့ အခုလို လုပ်ဆောင်လိုက်တာဟာ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် အပေါ်ကို သူမ အနေနဲ့ လုံးဝမထောက်ခံကြောင်း ပြသလိုက်တဲ့သဘောလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တေလာဆွစ်ဖ်ဟာ လူမည်းအမျိုးသား ဂျော့ခ်ဖလွိုက် ရဲ့ လည်ပင်းကို ဒူးနဲ့ ထောက်ပြီး အကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိအတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲဆိုပြီးတော့လည်း မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
တေလာဆွစ်ဖ်အနေနဲ့ သမ္မတ ထရမ့်ရဲ့ twitter အကောင့်ကို တိုက်ရိုက် mention ပြီး ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် သမ္မတ ထရမ့်ဘက်ကို ဘာမှတုံ့ပြန့်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
Tik Tok မှာ ဆငျဆာထိပွီး ရကျအကနျ့ အသတျနဲ့ တားမွဈပိတျပငျခံလိုကျရတဲ့ ကိုပေါကျ
သရုပျဆောငျ၊ ဒါရိုကျတာ ကိုပေါကျကတော့လကျရှိမှာ ကပျရောဂါအခွေ အနတှေကွေောငျ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှု အားလုံးကို ရပျနားထားရပွီး အိမျမှာပဲ အကြိုးရှိမယျ့အရာလေးတှကေို ပွုလုပျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုပေါကျက သူဝါသနာပါရာလေးတှကေိုလညျး ပွုလုပျနသေလို ပရိသတျတှေ ရယျမောပြျောရှငျစဖေို့ အခှီဗီဒီယို Tik Tok လေးတှကေို ရိုကျကူးနလေကျြရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုပေါကျကတော့ Tik Tok မှာပါ ဆငျဆာထိပွီး ပိတျပငျခံရတဲ့အကွောငျးကို အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။
“Tik Tok မှာလညျး ဆငျဆာရှိတယျဗြ။ ဆားနဲ့ပနျးသီး တို့ဆားတဲ့ tik tok နဲ့ အရကျမော့သောကျတာကို သနေတျသံထညျ့ထားတဲ့ tik tok တှကေို သူတို့ pageမှာပွဖို့ ခှငျ့မပွုဘဲ 1.6.2020/ 6:37 pmကမြှာ tik tok ကို vdoတငျလို့ရပါမယျတဲ့။ကိုပေါကျတို့မြား မွနျမာရုပျရှငျလော ကမှာပဲ ဆငျဆာထိတာမဟုတျဘူး။ Tik Tok မှာလဲထိတယျဗြ။ Tik Tok မှာ သူ မြား ဆော့ထားတာတှကေိုပဲ ကြှနျတျောလိုကျဆော့တယျ။ ကိုယျ့ကတြော့ ရကျအကနျ့အသတျနဲ့ တားမွဈခံရတယျ။ ၁ ရကျနရေ့ောကျဖို့ မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ စောငျ့လိုကျပါတော့မယျ။ ရောမကိုရောကျတော့ ရောမလိုကငျြ့ရမှာပေါ့။ သူ့ Tik Tok ကိုမှဆော့ခငျြနတေော့လညျး သူ့ဥပဒကေို လိုကျနာရမှာပေါ့။” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။
ကိုပေါကျကတော့ Tik Tok ဆော့ရတာ အရမျးဝါသနာပါသူတဈယောကျဖွဈပွီး နတေို့ငျးလိုလို Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတှကေို တငျပေးလရှေိ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိ သတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။ Source: Ko Pauk
TIK TOK မှာ ဆင်ဆာထိပြီး ရက်အကန့် အသတ်နဲ့ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတဲ့ ကိုပေါက်
သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်ကတော့လက်ရှိမှာ ကပ်ရောဂါအခြေ အနေတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို ရပ်နားထားရပြီး အိမ်မှာပဲ အကျိုးရှိမယ့်အရာလေးတွေကို ပြုလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက်က သူဝါသနာပါရာလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နေသလို ပရိသတ်တွေ ရယ်မောပျော်ရွှင်စေဖို့ အခွီဗီဒီယို Tik Tok လေးတွေကို ရိုက်ကူးနေလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုပေါက်ကတော့ Tik Tok မှာပါ ဆင်ဆာထိပြီး ပိတ်ပင်ခံရတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
“Tik Tok မှာလည်း ဆင်ဆာရှိတယ်ဗျ။ ဆားနဲ့ပန်းသီး တို့ဆားတဲ့ tik tok နဲ့ အရက်မော့သောက်တာကို သေနတ်သံထည့်ထားတဲ့ tik tok တွေကို သူတို့ pageမှာပြဖို့ ခွင့်မပြုဘဲ 1.6.2020/ 6:37 pmကျမှာ tik tok ကို vdoတင်လို့ရပါမယ်တဲ့။ကိုပေါက်တို့များ မြန်မာရုပ်ရှင်လော ကမှာပဲ ဆင်ဆာထိတာမဟုတ်ဘူး။ Tik Tok မှာလဲထိတယ်ဗျ။ Tik Tok မှာ သူ များ ဆော့ထားတာတွေကိုပဲ ကျွန်တော်လိုက်ဆော့တယ်။ ကိုယ့်ကျတော့ ရက်အကန့်အသတ်နဲ့ တားမြစ်ခံရတယ်။ ၁ ရက်နေ့ရောက်ဖို့ မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ စောင့်လိုက်ပါတော့မယ်။ ရောမကိုရောက်တော့ ရောမလိုကျင့်ရမှာပေါ့။ သူ့ Tik Tok ကိုမှဆော့ချင်နေတော့လည်း သူ့ဥပဒေကို လိုက်နာရမှာပေါ့။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
ကိုပေါက်ကတော့ Tik Tok ဆော့ရတာ အရမ်းဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နေ့တိုင်းလိုလို Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေကို တင်ပေးလေ့ရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိ သတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ Source: Ko Pauk
စံခြိနျသဈရေးထိုးနိုငျခဲ့တဲ့ Lady Gaga နဲ့ BLACKPINK တို့ရဲ့ Sour Candy သီခငျြး
May 30, 2020 by Shwengwe Games
Lady Gaga နဲ့ BLACKPINK တို့ ရဲ့ collaboration သီခငျြးအသဈတဈပုဒျဖွဈတဲ့ Sour Candy ကတော့ ထှကျရှိပွီး ၂၄ နာရီမပွညျ့ခငျမှာပဲ နိုငျငံပေါငျး ၄၂ နိုငျငံက iTunes music chart တှမှော နံပါတျ ၁ နရောကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒါဟာ ကပေေါ့ဂီတလောကမှာ BLACKPINK အဖှဲ့ နောကျထပျစံခြိနျတဈခုကို ရိုကျခြိုးနိုငျလိုကျခွငျးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီစံခြိနျဟာ ကပေေါ့လောကမှာ အခွားဘယျမိနျးကလေး အဖှဲ့မှ မရဖူးသေးတဲ့ စံခြိနျတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
BLACKPINK အဖှဲ့ဟာ အရငျကလညျး သူတို့ရဲ့ Kill This Love ဆိုတဲ့ သီခငျြးနဲ့ အခုလိုစံခြိနျကောငျးတဈခုကို တငျနိုငျခဲ့ပွီး အခုအခါမှာလညျး Sour Candy နဲ့ သူတို့ရဲ့ စံခြိနျကို ပွနျရိုကျခြိုးကာ နောကျထပျစံခြိနျသဈတဈခု ရေးထိုးနိုငျခဲ့တာပါ။
ဒီသီခငျြးကို အင်ျဂလိပျ နဲ့ ကိုရီးယားဘာသာစကားနှဈခုနဲ့ သီဆိုထားတာဖွဈပွီး Lady Gaga ရဲ့ Chromatic ဆိုတဲ့ album ထဲမှာပါဝငျလာတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈပါတယျ။
source – allkpop
စံချိန်သစ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ Lady Gaga နဲ့ BLACKPINK တို့ရဲ့ Sour Candy သီချင်း
Lady Gaga နဲ့ BLACKPINK တို့ ရဲ့ collaboration သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Sour Candy ကတော့ ထွက်ရှိပြီး ၂၄ နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲ နိုင်ငံပေါင်း ၄၂ နိုင်ငံက iTunes music chart တွေမှာ နံပါတ် ၁ နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ကေပေါ့ဂီတလောကမှာ BLACKPINK အဖွဲ့ နောက်ထပ်စံချိန်တစ်ခုကို ရိုက်ချိုးနိုင်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစံချိန်ဟာ ကေပေါ့လောကမှာ အခြားဘယ်မိန်းကလေး အဖွဲ့မှ မရဖူးသေးတဲ့ စံချိန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
BLACKPINK အဖွဲ့ဟာ အရင်ကလည်း သူတို့ရဲ့ Kill This Love ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ အခုလိုစံချိန်ကောင်းတစ်ခုကို တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အခုအခါမှာလည်း Sour Candy နဲ့ သူတို့ရဲ့ စံချိန်ကို ပြန်ရိုက်ချိုးကာ နောက်ထပ်စံချိန်သစ်တစ်ခု ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာပါ။
ဒီသီချင်းကို အင်္ဂလိပ် နဲ့ ကိုရီးယားဘာသာစကားနှစ်ခုနဲ့ သီဆိုထားတာဖြစ်ပြီး Lady Gaga ရဲ့ Chromatic ဆိုတဲ့ album ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Album အသဈရောငျးခလြို့ရတဲ့ငှမှေ ဒျေါလာတဈသိနျးကြျောကိုလှူဒါနျးသှားမယျ့ Lady Gaga
ကမ်ဘာကြျော ပေါ့ပျအဆိုတျော Lady Gaga ကတော့ Chromatica လို့အမညျရတဲ့ သူ့ရဲ့တေးသီခငျြး album သသဈ ရောငျးခလြို့ရတဲ့ငှမှေ ဒျေါလာ တဈသိနျးကြျောကို အစာရဆောငတျမှတျခေါငျးပါးမှု တိုကျဖကျြရေး ရနျပုံငှအေဖှဲ့အစညျးတဈခုထံကို လှူဒါနျးသှားဖို့ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Laddy Gaga ဟာ သူမရဲ့ ၆ ခှမွေောကျ တဈကိုယျတျော album ကို ဧပွီလထဲ ထုတျဝဖေို့ စီစဉျခဲ့ပမေယျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါကွောငျ့ ယာယီရှဆေို့ငျးခဲ့ရပွီး မလေ ၂၉ ရကျနရေ့ောကျမှသာ ထုတျဝဖွေနျ့ခြိနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ album ကိုမထုတျဝခေငျ ပစ်စညျးပို့ဆောငျရေး Delivery Application တဈခုဖွဈတဲ့ Postmates လကျတှဲထားတဲ့ အစီအစဉျတဈခုအရ Postmate ကနေ album တဈခပျြ အျောဒါတကျတိုငျး တဈဒျေါလာလှူဒါနျးသှားမယျလို့လညျး Lady Gaga က ပွောထားပါသေးတယျ။
Mg Kaung ( Thadinlaynyin)
Album အသစ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေမှ ဒေါ်လာတစ်သိန်းကျော်ကိုလှူဒါန်းသွားမယ့် Lady Gaga
ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ်အဆိုတော် Lady Gaga ကတော့ Chromatica လို့အမည်ရတဲ့ သူ့ရဲ့တေးသီချင်း album သသစ် ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေမှ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းကျော်ကို အစာရေဆာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံကို လှူဒါန်းသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Laddy Gaga ဟာ သူမရဲ့ ၆ ခွေမြောက် တစ်ကိုယ်တော် album ကို ဧပြီလထဲ ထုတ်ဝေဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် ယာယီရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြီး မေလ ၂၉ ရက်နေ့ရောက်မှသာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ album ကိုမထုတ်ဝေခင် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Delivery Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Postmates လက်တွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုအရ Postmate ကနေ album တစ်ချပ် အော်ဒါတက်တိုင်း တစ်ဒေါ်လာလှူဒါန်းသွားမယ်လို့လည်း Lady Gaga က ပြောထားပါသေးတယ်။
ရငျခုနျခငျြစရာကောငျးတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ညို့ယူဖမျးစားလိုကျပွနျတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော
မငျးသမီးခြောလေး သငျဇာဝငျ့ကြျောလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ အမိုကျစားဖကျရှငျတှကေို Sexy ကကြဝြတျစားဆငျယငျတတျသူလေးလို့ အားလုံးကမွငျမိကွမယျ ထငျပါတယျ။သူမဟာ ဆယျစုနှဈကြျောတိုငျအောငျ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှေ သိမျးကွုံးရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးလေး တဈလကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
သငျဇာကတော့ အမွဲတမျး သူမရဲ့ အလှတရားတှပေျေါလှငျပွီး ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့နဲ့ ညို့အားပွငျးတဲ့ ပုံရိပျတှကေို လှုမှုကှနျယကျဖဘှေ့တျပျေါတှငျ ဖျောပွလရှေိ့တာဖွဈပွီး ရပေနျးစား လူကွိုကျမြားတာလညျးတှရေ့ပါတယျ။လတျတလောမှာတော့ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးတဲ့ သူမရဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ညို့ယူဖမျးစားထားပွနျတဲ့ အလနျးစားပုံလေးတှကေိုဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ။
သငျဇာကတော့ အမွဲတမျး အမိုကျစား ပုံရိပျတှကေို ဖျောပွလရှေိ့ပွီး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစား လူကွိုကျမြားခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ကဲ….ခဈြပရိသတျကွီးတှကျ သငျဇာရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ကွညျ့ရှုနိုငျစရေနျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ပရိသတျကွီးကလညျး သငျဇာရဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျအားပေးလိုကျပါအုံးနျော။
Credit Alexus – Cele Zone
Photo – Thin Zar Wint Kyaw
ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေကို Sexy ကျကျဝတ်စားဆင်ယင်တတ်သူလေးလို့ အားလုံးကမြင်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်။သူမဟာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ သိမ်းကြုံးရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာကတော့ အမြဲတမ်း သူမရဲ့ အလှတရားတွေပေါ်လွင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ညို့အားပြင်းတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လှုမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး ရေပန်းစား လူကြိုက်များတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားပြန်တဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သင်ဇာကတော့ အမြဲတမ်း အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲ….ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွက် သင်ဇာရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကလည်း သင်ဇာရဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်အားပေးလိုက်ပါအုံးနော်။
Sex Education ဆိုတိုငျး အပွာကားမဟုတျဘူး၊ တဂြိမျးဂြိမျး ဟိုဟာလုပျနကွေတာမဟုတျဘူးလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလိုကျတဲ့ ဝငျးမငျးသနျး
ဝငျးမငျးသနျးကတော့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြတှပေျေါမှာ လူငယျပရိတျသတျတှရေော လူလတျပိုငျးပရိတျသတျတှပေါမကနျြ အားပေးထောကျခံခွငျးကိုရထားတဲ့ social influencer တဈယောကျပါ။
အခုလတျတလောမှာ လူပွောမြားတဲ့ Sex Education ကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီးတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးအတှငျးက အခရာအမြိုးသမီးဖောငျဒေးရှငျးကပွုလုပျတဲ့ စကားဝိုငျးတဈခုမှာလညျး သူမက ပါဝငျဆှေးနှေးခဲ့ပါသေးတယျ။ အခုအခါမှာလညျး sex education နဲ့ ပကျသကျလို့ သူမရဲ့ အမွငျကို အခုလိုပွောပွထားပါသေးတယျ။
” ကိုယျသာမိဘဆိုရငျ ကိုယျမှေးလိုကျတဲ့ ကိုယျ့သားသမီးရဲ့ ကိုယျခန်ဓာမှာ ဖွဈပကျြ ပွောငျးလဲတာ မှနျသမြှကို ကိုယျက လကျဦးဆရာ မိဘအနနေဲ့ ကိုယျအရငျ ပွောပွခငျြတယျ။ အဲဒီတော့ မိဘတှအေနနေဲ့ Quality Parents ဖွဈဖို့လိုတယျ။
ဒီလိုဟာကိုသငျပေးဖို့က မိဘတှေ၊ ကိုယျ့ရဲ့ လကျပှနျးတတီးကွီးရတဲ့ အုပျထိနျးသူတှဆေီကနေ အရငျဆုံးလာရမှာ။ကြောငျးက ဘယျလိုပဲသငျသငျ၊ကြောငျးကဆယျ့ငါးနှဈ၊ဆယျ့ခွောကျနှဈမှ သငျတာ။အဲဒီမတိုငျခငျမှာလိုအပျနတေဲ့ sex education,sexuality, sexual education တှကေို ဘယျသူက သငျမှာလဲ။ ဒါတှကေို မိဘတှကေ သငျရမှာ။ ဒီလိုသငျဖို့ မိဘတှကေ ပညာတတျဖွဈနဖေို့မလိုဘူး။ ဘှဲ့အမြားကွီးရစရာလညျး မလိုဘူး။ ကလေး အသကျအရှယျအလိုကျ သိသငျ့တာကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး အမတေဈယောကျအနနေဲ့ သမီးကို ပွောသှားမယျဆိုရငျ တခွားသူတှေ ဘယျလိုပဲသငျသငျ ဂရုစိုကျစရာ မလိုဘူး။
အပြိုဖျော ဝငျစမှာ ဘာတှပွေောငျးလဲလာလဲ၊ ရာသီလာရငျဘာဖွဈလဲ၊ လိငျဆကျဆံမှု ပွုမယျဆိုရငျ ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုးတှေ ဘာဖွဈမလဲဆိုတာ ကလေးတှကေို လိငျဆကျဆံမှုပွုဖို့ အားပေးတာမဟုတျဘူး။ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တနျဖိုးထားအောငျ၊ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျကို တနျဖိုးထားအောငျ၊ ဒီခန်ဓာကိုယျနဲ့ တဈခုခုလုပျတော့မယျဆိုရငျ ကိုယျ့တနျဖိုးကို ကိုယျသိနပွေီဆိုရငျ ဘယျတော့မှ တနျဖိုးမဲ့တဲ့ကိစ်စကို မလုပျတော့ဘူးလို့ အဈမကတော့ ယုံကွညျပါတယျ ”
ဒါ့အပွငျ ဝငျးမငျးသနျးက Sex Education နဲ့ ပကျသကျပွီး မကောငျးမွငျနကွေတာကိုလညျး “Sex Education ဆိုတိုငျး အောကားမဟုတျဘူး၊ တဂြိမျးဂြိမျး ဟိုဟာလုပျနကွေတာမဟုတျဘူး။ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေး လူသားတဈယောကျရဲ့အဖွဈအပကျြ၊ အပွောငျးအ လဲတှကေို သသေခြောခြာ ဂရုစိုကျပွီး ကွညျ့သှားမယျဆိုရငျ ဒါက တနျဖိုးရှိတဲ့ လူတှအေဖွဈပါ တနျဖိုးမွငျ့တငျပေးတယျလို့ထငျတယျ။ ” လို့ ရှငျးပွလာပါတယျ။
Sources Win Min Than
Sex Education ဆိုတိုင်း အပြာကားမဟုတ်ဘူး၊ တဂျိမ်းဂျိမ်း ဟိုဟာလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့ ဝင်းမင်းသန်း
ဝင်းမင်းသန်းကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်တွေပေါ်မှာ လူငယ်ပရိတ်သတ်တွေရော လူလတ်ပိုင်းပရိတ်သတ်တွေပါမကျန် အားပေးထောက်ခံခြင်းကိုရထားတဲ့ social influencer တစ်ယောက်ပါ။
အခုလတ်တလောမှာ လူပြောများတဲ့ Sex Education ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက အခရာအမျိုးသမီးဖောင်ဒေးရှင်းကပြုလုပ်တဲ့ စကားဝိုင်းတစ်ခုမှာလည်း သူမက ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုအခါမှာလည်း sex education နဲ့ ပက်သက်လို့ သူမရဲ့ အမြင်ကို အခုလိုပြောပြထားပါသေးတယ်။
” ကိုယ်သာမိဘဆိုရင် ကိုယ်မွေးလိုက်တဲ့ ကိုယ့်သားသမီးရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲတာ မှန်သမျှကို ကိုယ်က လက်ဦးဆရာ မိဘအနေနဲ့ ကိုယ်အရင် ပြောပြချင်တယ်။ အဲဒီတော့ မိဘတွေအနေနဲ့ Quality Parents ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
ဒီလိုဟာကိုသင်ပေးဖို့က မိဘတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ပွန်းတတီးကြီးရတဲ့ အုပ်ထိန်းသူတွေဆီကနေ အရင်ဆုံးလာရမှာ။ ကျောင်းက ဘယ်လိုပဲသင်သင်၊ ကျောင်းက ဆယ့်ငါးနှစ် ၊ ဆယ့်ခြောက်နှစ်မှ သင်တာ။ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ sex education,sexuality, sexual education တွေကို ဘယ်သူက သင်မှာလဲ။ ဒါတွေကို မိဘတွေက သင်ရမှာ။ ဒီလိုသင်ဖို့ မိဘတွေက ပညာတတ်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူး။ ဘွဲ့အများကြီးရစရာလည်း မလိုဘူး။ ကလေး အသက်အရွယ်အလိုက် သိသင့်တာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ သမီးကို ပြောသွားမယ်ဆိုရင် တခြားသူတွေ ဘယ်လိုပဲသင်သင် ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူး။
အပျိုဖော် ဝင်စမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲ၊ ရာသီလာရင်ဘာဖြစ်လဲ၊ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုမယ်ဆိုရင် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ကလေးတွေကို လိင်ဆက်ဆံမှုပြုဖို့ အားပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားအောင်၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားအောင်၊ ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်သိနေပြီဆိုရင် ဘယ်တော့မှ တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ကိစ္စကို မလုပ်တော့ဘူးလို့ အစ်မကတော့ ယုံကြည်ပါတယ် ”
ဒါ့အပြင် ဝင်းမင်းသန်းက Sex Education နဲ့ ပက်သက်ပြီး မကောင်းမြင်နေကြတာကိုလည်း “Sex Education ဆိုတိုင်း အောကားမဟုတ်ဘူး၊ တဂျိမ်းဂျိမ်း ဟိုဟာလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်၊ အပြောင်းအ လဲတွေကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပြီး ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင် ဒါက တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတွေအဖြစ်ပါ တန်ဖိုးမြင့်တင်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်။ ” လို့ ရှင်းပြလာပါတယ်။
Categories Celebrities Tags Sex Education, Win Min Than
← Previous Page1 … Page207 Page208 Page209 … Page227 Next →
© 2021 ShwengweGames • Built with GeneratePress